Abantu vs. Ama-Chatbots: Ubani Ozokwazi Ukunakekela Amakhasimende? | Martech Zone
Abantu vs. Ama-Chatbots: Ubani Oyokwazi Ukunakekelwa Kwekhasimende?
NgoMgqibelo, Januwari 12, 2019 NgoMgqibelo, Januwari 12, 2019 UJános Szabó
Emuva ngo-2016 lapho izingxoxo zaduma wonke umuntu wathi bazothatha indawo yabasebenzi eminyangweni yokunakekelwa kwamakhasimende. Ngemuva kokuqoqa isipiliyoni seminyaka engu-2.5 mayelana nezingxoxo ze-Messenger iqiniso libukeka lihlukile namhlanje.
Umbuzo awukona okwezingxoxo zokufaka esikhundleni sabantu, kepha kunalokho ukuthi izingxoxo zezingxoxo zingasebenza kanjani ngokubambisana nabantu ngokubambisana.
I-Chatbot tech yayisithembiso esikhulu ekuqaleni. Ukufuna ukuphendula umbuzo wamakhasimende ngendlela yokuxoxa, futhi unikeze usizo olufana nolomuntu ezimweni eziphindaphindwayo zokusebenzisa. Kuvele ukuthi ubuchwepheshe obukulesi simo obukuso manje abukwazi ukufeza lesi sithembiso. Ama-Chatbots asebenze ngezinga lokwehluleka le-70%,okushiye imibuzo yamakhasimende ingaphendulwa futhi kwadala isipiliyoni esibi samakhasimende.
I-Facebook isabele ngokushesha futhi yalungisa phansi okulindelwe mayelana nezingxoxo. Esikhundleni sokusebenzisa izingxoxo zombhalo ezivulekile abathuthukisi be-chatbot bakhuthazwe ukwakha ukusebenzisana okususelwa kumthetho. I-UX yenziwe lula kumakhasimende ngokuthepha izinkinobho ezahlukahlukene ngaphakathi kwe-Messenger UI. I-Facebook iyeke ukusebenzisa leli gama i-chatbot futhi manje ibiza lezi zinsimbi ezisebenzisanayo isipiliyoni sesithunywa. Ngalesi sinyathelo, iqhaza lezingxoxo libuye lasuka ekuphatheni izingxoxo laya ekudaleni iziteshi zokuzenzela (IVR like) zemibuzo yamakhasimende weTier 1.
Umsebenzi omkhulu wama-chatbots usukile ekunakekelweni kwamakhasimende waya emisebenzini ehlobene nokumaketha. Ama-Chatbots asebenza namuhla njengendawo yokuqala yokuxhumana ebhekiswe kumakhasimende futhi ancike ekungeneleni komuntu lapho isidingo samakhasimende sesiyinkimbinkimbi.
Futhi ngicabanga ukuthi kulungile kanjalo!
Ikusasa Lokunakekelwa Kwamakhasimende Okususelwa Engxoxweni
Ikusasa lokunakekelwa kwamakhasimende okusekelwe engxoxweni lizoba yisixazululo se-hybrid lapho ama-bots asemgqeni wangaphambili futhi abantu (bevame ukusetshenziswa) ukwenza isipele.
Amabhothi azofinyelela ngenkuthalo kwinani elikhulu lamakhasimende, futhi abantu bazobhekana nemikhombandlela efanelekile.
AmaBots azosiza amakhasimende ukuthi azulazule kwi-FAQ njengamadokhumenti, futhi abantu bazongena uma umbuzo wamakhasimende uxaka kakhulu.
AmaBots azoletha izindlela ezinhle zokutholakala komkhiqizo, ukusekela ukuthengisa ngendlela esabekayo futhi abantu bazobhekana nezingxoxo zokunakekela amakhasimende.
Kungokwemvelo ukuthi izinkampani zizizwe zilingeka ekunciphiseni izingxoxo zezingxoxo uma kuqhathaniswa nabasebenzi ababizayo futhi abavame ukuguquguquka. Futhi KULUNGILE ukwenza imishini imisebenzi nezingxoxo ezingadingi uzwela lomuntu. Kepha uzwela lomuntu alunakuzenzekela. Amathuba abalulekile okukhula komkhiqizo ahlala ekwakheni ukuxhumana okungokomzwelo namakhasimende ngokuhlangenwe nakho komuntu siqu. Uma ikhasimende lizwa ukunakekelwa komuntu uqobo kungenzeka liphinde lithenge futhi. Ngezindleko ezikhulayo zokuthengwa kwamakhasimende, udinga ukuqinisekisa ukuthi abathengi obatholayo babuya kaninginingi.
“… Okungcono” kukhulu kune- “ngokushesha.”
Ngenkathi amakhasimende abenomuzwa wokuthi umkhiqizo unikeza insizakalo esheshayo, ayenamathuba aphindwe kayisithupha okubandakanya kakhulu. Amakhasimende anikeze lo mkhiqizo izilinganiso ezinhle kuzinto “zabantu” (njengenhlonipho yomenzeli wokunakekelwa kwamakhasimende nokuzimisela ukusiza) ayenamathuba aphindwe kasishiyagalolunye okubandakanya ngokugcwele.
Inselelo ukuthi thola ibhalansi phakathi kokuqamba nokuhambisana. Ukhiye wokumamatheka ebusweni bamakhasimende akho umayelana nokuthola ibhalansi elungile phakathi kwemisebenzi ezenzakalelayo nokunakekelwa komuntu siqu.
Ngenhlanhla, ama-chatbots akuyona ukuphela kwendlela ubuchwepheshe obungasiza ngayo abantu. Kunezindlela ezilula zokwengeza ukukhiqizwa kwama-ejenti abantu ngaleyo ndlela kwandise inani eliphelele lokunakekelwa komuntu i-ejenti yengxoxo enganikeza amakhasimende.
Umthelela wokusebenzisa i-AI ekusebenzeni kwamakhasimende omphakathi kungenzeka ungaholeli ekwehlisweni kwemisebenzi yonke yamakhasimende. Esikhundleni salokho, ama-brand angasebenzisa umkhiqizo owandisiwe ukuhlinzeka ngezinga eliphakeme kakhulu lenkonzo ngosayizi weqembu ofanayo. I-AI isiza umenzeli wengxoxo ngalo lonke ulwazi oludingekayo lwasemuva ukuphendula imibuzo eyinkimbinkimbi ngokwengeziwe yamakhasimende.
"I-AI izoba ubuchwepheshe bokubamba amatafula, obubucayi kunoma iyiphi inkampani efuna ukuhlala incintisana endaweni yokuhlinzeka ngamakhasimende."
Ukufunda ngomshini kungakhulisa amandla ama-ejenti wengxoxo ngendlela evumela ukuthi bagcine umngcele wabo siqu. Umgomo wethu kuChatler.ai ukonga isikhathi sabenzeli bezingxoxo, ngokwenza ulwazi lwengxoxo lutholakale kalula, futhi sincoma izimpendulo ezifanele kakhulu zabenzeli bezingxoxo emibuzweni engenayo yomthengi. IChatler.ai ingena esikhundleni somsebenzi ongakhiqizi nophindaphindayo "wokuthola-ukukopisha-unamathisela" wabenzeli bezingxoxo ngokwenza umsebenzi onzima wokuphakamisa esikhundleni sabantu. Ama-smart algorithms angahlaziya umlando wezingxoxo futhi ancome izimpendulo zemibuzo ebuzwa njalo. Abantu benza isinqumo sokugcina bese bengeza ukuthintwa komuntu siqu emyalezweni ngamunye ukuqinisekisa ukuthi ikhasimende lizizwa lithandwa. Ubuchwepheshe bokufunda ngomshini weChatler.ai busiza imikhiqizo ukuletha izimpendulo zokunakekelwa kwamakhasimende ezisheshayo, ezinembile, nezingaguquguquki.
With Chatler.ai ungaphatha inani elikhulile lezingxoxo zokunakekelwa kwamakhasimende nethimba elifanayo. Vumela abantu baphathe izingxoxo ezibalulekile. Vumela i-AI ikusize noma izingxoxo zengevu zinamathele.
Thola okuningi mayelana nokuthi kanjani Oxoxa ingakusiza namhlanje ukuletha isipiliyoni esihle samakhasimende futhi wandise ukwethembeka kwamakhasimende nokuthenga kabusha.
Bhalisela i-Akhawunti Yamahhala Yokuxoxa
UJános Szabó ungusomaqhinga wedijithali kanye nochwepheshe wezokuxhumana. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-10 yokuhlangenwe nakho kwe-ejensi yokukhangisa, wakhe uhlelo lokusebenza lokuxhumana olubukwayo okungaphezulu kokulanda okungu-2million. Namuhla, uJános uhola iqembu likaChatler, imbondela ye-AI yokunakekelwa kwamakhasimende.
Thola Usizo Lokuqamba Igama Lakho Ngebhizinisi Lakho
Ukubuyekezwa Komkhiqizo we-E-commerce: Izizathu eziyi-7 Kungani Ukubuyekezwa Kwe-Inthanethi Kubalulekile Emkhakheni Wakho